Imwe chete post akateedzana Fekitori | China Imwe chete post akateedzera Vagadziri, Vatengesi
Imwe chete posvo ingroud simudza L2800 (F) yakakodzera yekugeza mota uye nekukurumidza kugadzirisa
Inoshongedzwa nerudzi-rworudzi rutsigiro ruoko, iyo inosimudza siketi yemotokari. Hupamhi hweruoko runotsigira ndi 520mm, zvichiita kuti zvive nyore kuwana mota pamidziyo. Ruoko runotsigira rwakashongedzwa neiyo grille, iyo ine kukwana kwakanaka uye inogona kunyatso kuchenesa mota chassis.
Imwe chete posvo ingroud simudza L2800 (F-1) ine hydraulic chengetedzo chishandiso
Inoshongedzerwa nezambuko-rerudzi rwunotsigira ruoko, Ruoko runotsigira rwakashongedzwa neiyo grille, iyo ine kukwana kwakanaka uye inogona kunyatso kuchenesa mota chassis.
Munguva isiri-yekushanda maawa, positi yekusimudza inodzokera pasi, ruoko rwekutsigira runotsvedza nevhu, uye harutore nzvimbo. Inogona kushandiswa kune rimwe basa kana kuchengeta zvimwe zvinhu. Inokodzera zvidiki zvekugadzirisa uye zvitoro zvekunaka.
Imwe chete post ingroud lift L2800 (F-2) inokodzera matai anotsigira
Inoshongedzerwa ne4m refu bhiriji ndiro pallet yekusimudza matai emota kusangana nezvinodiwa zvenguva refu-vhiri mota. Mota dzine vhiri rakapfupika dzinofanira kumiswa pakati pehurefu hwepaleti kudzivirira kumberi uye kumashure mitoro isina kuenzana. Iyo pallet yakashongedzwa neiyo grille, iyo ine kukwana kwakanaka, iyo inogona kunyatso shambidza chassis yemotokari uye zvakare kutarisira iyo mota yekuchengetedza.
Imwechete Kuita Cylinder, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Kaviri Post Inground Simudza, Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota,